प्रतिपक्षको नारा र पशुपतिको गित
By radiovision on	 February 18, 2019 BREAKING NEWS, अर्थ-वाणिज्य, प्रमुख समाचार, विचार-अन्तरवार्ता
मनोज ताम्ली ।
यतिबेला गायक पशुपति शर्माको चर्चा छ । उनले गाएको गित ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ का कारण उनले चर्चा कमाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अहिले उनैले गाएको गितका सन्दर्भमा बहस चलिरहेको छ । बेलाबेलामा चर्चा आइरहेका शर्मा यहि गितका कारण बहसमा तानिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा उनको गितको चर्चा भइरहेको छ । उनले सार्वजनिक गरेको गितका बारेमा धेरै कोणबाट धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
म शर्मा जी को फ्यान पनि हुँ । उनले गाएको ‘मलाई अमेरिका यहि, अष्ट्रेलिया यहि’ गितले मलाई तानेको थियो । किनभने त्यो गितले नेपालको युवाहरुलाई देशमै अवसर छ भन्ने सन्देश दिएको थियो । हामी पनि देशभित्रै केहि गर्नु पर्छ र यहि देशमा अवसरको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा छौ । गित संगीत मानव जिवनका लागि आवश्यक छ । सकारात्मक सोच र उर्जा प्रदान गर्न कला,साहित्यको अपरिहार्य छ ।
राजनीतिक आन्दोलनले मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रुपमा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । जनताको अपेक्षा असिमित छन् । त्यो राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्वभाविक पनि हो । परिवर्तन, विकास , समृद्धि चरणबद्ध रुपमा अघि बढ्दै जान्छ । तर, अहिलेको समाज र पुस्तामा धैर्यता गर्ने पक्षमा छैन । उनीहरु सबै क्षेत्रमा शुसासन, सुव्यवस्था तुरुन्तै खोजिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणाहरु बढिरहेका छन् । जसले गर्दा पशुपति शर्माले गाएको गितका केहि शब्दहरु असान्दर्भिक हुँदाहँुदै समर्थन जनाइरहे । गित संगीत कला र साहित्य मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति महत्वपूर्ण सावित भएको कुरा इतिहसले देखाउँछ । देशलाई माया गर्ने निरंकुश राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध हासिहासी संघर्षको मैदानमा उत्रनका लागि हिजोका गितहरु शक्तिशाली सावित भएका थिए । त्यतिखेर बन्दुकको नालबाट बचेर गाउँ गाउँमा क्रान्तिको सन्देश दिदैं हिड्ने गायकहरु चर्चा र व्यवसायीक लाभका निम्ति नभई देश र जनताको निम्ति निस्वार्थ रुपमा गुमनाम रुपमै गाइरहे । त्यसमा राज्य व्यवस्था विरुद्ध आक्रोस हुन्थ्यो, सभ्य भाषामा नेपाली नागरिकको मन जितेकै हुन्थ्यो । गाउँगाउँबाट उठ, बस्तीबस्तीबाट उठ, फेर्नलाई उठ, जस्ता गितहरु पनि नेपाली गित संगितको क्षेत्रमा प्राप्त गरियो ।
समाजको चरित्र दर्भाग्यपूर्ण छ । मुलुकमा भएका आम समस्याको समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, हामीले के बुझ्नु पर्छ भने खाल्डो पुर्न माटो बोकेर हिड्ने काम मन्त्री र सांसदको होइन । उनीहरुले काम गर्नका लागि नीति निर्माण गर्ने हो । त्यसको कार्यन्वय गर्ने जिम्मा कर्मचारीलाई छ । त्यस विषयमा कसैले सोचेका हुदैनन् । अन्ततः सरकारको आलोचना विकल्प ठानिएको छ ।
पशुपतिले गित गाए । उनको काम नै हो त्यो । त्यसमा अचम्म मानिएको छैन । उनले गित गाएर मुलुकमा सकारात्मक सन्देश दिने हो । समाजभित्र भएका विकृति विसंगतिलाई पनि संगित मार्फत नागरिकलाई चित्रण गर्ने हो । शर्माको गितमा सबै नेपालीले बुझेको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई आवरण बनाएका छन् । तर, सबैले आफ्नो काम गर्दा देशको गरिमामा आँच पुग्ने सम्माननीय व्यक्तित्वको मान हानी हुने गरि गित गाउने छुट कसैलाई छैन । उनले गितमा भनेका छन्, यमराजको राज भन्दै कम्युनिष्टको झण्डा देखाए । अहिले मुलुकको सार्वभौम सम्पन्न जनताबाट दुई तिहाई मत प्राप्त गरी कम्युनिष्ट पार्टी सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । यो सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता लोक कल्याणकारी काम गरिरहेको अवस्थामा धेरै समयअघिका नकारात्मक समस्याहरु देखाउदै नागरिकहरुलाई गित मार्फत भ्रम छर्ने काम भएको छ । यस्तो गित जनताको काम गरिरहेको सरकारलाई सुन्ने फुर्सद छैन । केहि कम्यूनिष्ट विरोधी वा प्रतिपक्षी साथीहरुले भने जस्तो सिंहदरवार हल्लिन त के, गितले सामान्य अर्थ पनि राख्दैन । जुन प्रतिपक्षले एजेण्डा विहीन भएको अवस्थामा सानो राहत महसुस गरेको छ ।
सरकार देशमा आशा बाँडिरहेको छ । सपना बाँडिरहेको छ । र, सरकारले नागरिकलाई भरोसा दिलाई रहेको छ, समृद्धि संभव छ, हाम्रै पालामा । सरकारले देशमा समुन्द्र नभए पनि पानी जहाज ल्याइसकेको छ । खोलाको आकार र गहिराई अनुसारको पानी जहाजले नेपाल जस्तो भुपरिवेष्ठित देशमा जलमार्गको सपना मात्र पुरा गरेको छैन, जनतालाई सेवा पनि दिइरहेको छ । चाँडै नेपालमा रेल कुद्दै छ । विकासको लहर चलिरहेको छ । यसर्थ,त्यो गितले सरकारलाई कुनै असर गदैन । त्यसको असरको अनुभूति प्रतिपक्षीले गर्नुपर्छ । किनभने, कांग्रेस इतिहासमै लामो समय सत्तामा रह्यो । तर, कुनै काम गर्न सकने ।
कार्यकर्तालाई कुकुरसँग जोडिएको छ । कार्यकर्ता केहि बुझदैनन्, कुकुर जस्तै भुक्छन् भनिएको छ । यो कलाकारिताको सभ्यता हो ? मुलुक बनाउन राजनीतिक दलको भूमिका हुन्छ । राजनीतिक दल कार्यकर्ताले बनाउने हो । उनको शब्दले देश बनाउन हिडेका कार्यकर्तामो मान मर्दन गर्ने काम भएको छ । ‘अरु देशमा पाइदैन, नेपाल मै हो छुट’ गितमा भनिएको छ । उनको यो हरफले भ्रष्टाचारलाई झन प्रोत्साहन गरेको छ । गित संगितको माध्यमबाट देशको कानुनले बर्जित गरेको गलत कामलाई प्रोत्सान गर्ने अधिकार उनलाई छैन । अर्को हरफमा भनेका छन्, डेढ अर्वको हेलिकप्टर चढ्छिन् राष्ट्रपति । गणतन्त्रको प्रतिकलाई तोकेरै धेरै विवादित अमर्यादित शब्दले भरिएको गितमा रमाउन मिल्छ र ? यसले गणतन्त्र मै प्रहार गरेको छ ।
गायक शर्माले गित गाए । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरे । सराकात्मक र नकारात्मक धारणाहरु सामाजिक सञ्जालमै छरियो । उनले आफै गल्ती महसुस गरेर होस् या अन्य कारणले सामाजिक सञ्जालमै माफि माग्दै शब्दहरु संशोधन गरेर पुनःगित सार्वजनिक गर्ने भन्दै आफै हटाए । तर, सरकार अधिनायकबाद भएको, गितले सरकार हल्लेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा रमाउनेहरु भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । उनीहरु यति नकारात्मक मानसिकता बोकिरहेका छन् कि , स्वयम् सम्बन्धित व्यक्तिले शब्द चयनमा त्रुटि भएको र त्यसलाई सुधारेर ल्याउछु भन्दा पनि, सर्जकले नै त्रुटि भनिसकेको गितमा रमाइरहेका छन् ।
जति बेला मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा थियो । जतिवेला देश बनाउने कुनै सपना थिएन । देशको अवस्था तहसनहस थियो । त्यो बेला अमेरिका यहि, अष्ट्रेलिया यहि भन्ने कलाकार कुन शक्तिले प्ररितले आज यस्तो निराशाले भरिएको गित गाइरहेका छन् । लाग्छ, गायकीको माध्यमबाट प्रतिपक्ष दलको आन्दोलनको नारा उजागर भइरहेको छ ।
(लेखकः अनुरास्ववियु क्याम्पस जिल्ला कमिटी झापाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)